2019 CNS fitsaboana gripa GM1 kisoa (37758-47-7) - APICMO
Fahalalàn-jaza > Ny 2019 CNS Fitsaboana ny Tazomoka Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Brain (37758-47-7)
Ny natiora Monosialotetrahexosylganglioside dia odiatrophique électriène izay misy ny fisoratana anarana GM1.
Ny gangliosides dia anisan'ny kilasy misy andian-ganglio, izay ahitana glycospingolipid miaraka amin'ny sisa amin'ny sirikan'ny sirikan'ny siramamy. Ny kininina polysaccharide sialated dia mifandray amin'ny ceramide amin'ny alàlan'ny fifandraisana β-glycosidic. Tsy vitan'ny hoe sehatry ny plasmika ny neuronal fa ao amin'ny reticulum endoplasmic.
Na dia miakatra ho an'ny 0.1% amin'ny lanjany indrindra amin'ny atidoha aza izy ireo, ny gangliosides dia mitaky amin'ny 10% amin'ny lipids amin'ny ankapobeny. Mampirisika ny fanavahana ny cellules, ny apoptose, ny neuroprotection, ary ny famotsorana ny neurotrophins.
Ny monosialotetrahexosylganglioside dia singa tsy mifanentana mifototra amin'ny kininina oligosaccharide sy ceramide. Ny molekiola dia mampiseho ny toetry ny hydrophilic sy lipophilic. Ny tsy mety levona amin'ny rano sy ny tavy dia ny Monosialotetrahexosylganglioside dia mora mora mivezivezy amin'ny alàlan'ny sakana amin'ny ati-doha.
Ny natiora monosialotetrahexosylganglioside sodium GM1 dia mitana toerana manan-danja eo amin'ny atidoha. Manana ny toetra voajanahary izy, toy ny fanarenana ny fahasimban'ny fahasalamana, ny fanarenana ny asany, ary ny famerenana indray ny neurons taorian'ny ratra. Noho izany antony izany, ny sodium Monosialotetrahexosylganglioside dia mahasoa amin'ny fitsaboana ny ratra amin'ny ati-doha. Ny sasany amin'ireo aretina mifandray amin'izany dia ahitana ny trauma cerebrospinal, ny fahasimbana amin'ny serivisy, ary ny faharatran'ny sela malemy. Ny ankamaroan'izany dia mifantoka amin'ny toerana misy fahasimban'ny sela.
Histoire de Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1)
Ny fandalinana ny GM1 sy ny anjara asany ao neuroprotection manomboka amin'ny 1970s. Nanomboka teo, ireo mpikaroka siantifika dia naneho fahalianana tamin'ny fitambarana tamin'ny fanatanterahana ny kolotsaina sy ny fianarana biby. Ireo fanandramana rehetra dia mifantoka amin'ny fametrahana ny lanjan'ny GM1 amin'ny aretin'ny neurodegenerative.
Ao amin'ny 1986, amin'ny alalan'ny TRB SA, ny sodium Monosialotetrahexosylganglioside dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy, GM-1. Rehefa nanome toky ny vokatra azo tamin'ny fandinihana biby, dia nanao fanadihadiana momba ny fiantraikan'ny siramamy Monosialotetrahexosylganglioside (GM1) ny olombelona ny manam-pahaizana amerikana. Ny lohahevitry ny fianarana dia ny marary amin'ny fahavoazana CNS noho ny fahasimbana ny tadin'ny hazon-damosina, ny tsoka, ny aretin'i Parkinson, ary Alzheimer.
Hatramin'izay, ny firenena tahaka an'i Arzantina sy i Italia dia nanaiky ny fampiharana ara-pahasalamana ho toy ny fanafody fitsaboana ho an'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana.
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium(GM1) fepetra arahana
Anarana IUPAC (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-[(E,2R,3S)-3-hydroxy-2-(icosanoylamino)icos-4-enoxyl]-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid
Meny fitetezana 1546.841 gmol-1
· Malemy loha amin'ny metanol / chloroform
· Alao tsy voapoizina amin'ny ethanôla tsy misy rano
Bika Aman 'endrika Mavokely ho an'ny vovon-tany tsy misy fotony
Fiarovam-pirenena Roa taona
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium(GM1) Fomba fiasa
Monosialotetrahexosyl ganglioside dia miasa amin'ny fomba maro. Ny molekiola dia ivon-toeran'ny ankamaroan'ny asa ara-batana amin'ny rafi-pitabatabana.
Ao amin'ny selan'ny sela ao amin'ny atidoha, ny Monosialotetrahexosylganglioside dia miasa mba hihazonana ny fifandanjana ion ao anaty sy ivelan'ny vatan'ny membraneous. Tsy vitan'ny hoe manatsara ny tsy fahampian'ny hozatra izy io, fa mampitombo ny piozôro sy ny calcium koa.
Amin'ny tranga naratra, Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) dia miditra amin'ny fiarovana ny rafitra membraneous. Manimba ny asan'ny phospholipase A2 izy io, mandanjalanja ny fatran'ny ionona calcium, ary manapaka ny fananganana radicals free.
Ny atidoha dia manamafy ny asan'ny kininina proteinina ao amin'ny sela, izay mety ho tompon'andraikitra amin'ny apoptose. GM1 dia manakana sy manodina io dingana io amin'ny alalan'ny fihazonana ny metabolismin'ny proteinina ao anatin'ny cytoplasma sy ny voan'ny kernel.
Ao anatin'ny mitochondrion, Monosialotetrahexosylganglioside dia miasa mba hampitsaharana ny famokarana ATP sy ny asa fanentanana. Manamboatra ny fahavoazana azo atao amin'ny rojo elektronika izy ary manatsara ny phosphorylation oksidy. Vokatr'izany dia mbola salama tsara ny fiasan'ny atidoha amin'ny atidoha.
Ny fampidiran-tsolika monosialotetrahexosylganglioside dia mamporisika ny famoahana axonaly amin'ny fifantohana ireo fototarazo ho an'ny mpandray azy manokana. Io fihetsika io dia mamerina indray ny fibraindrihan'ny nerveuse ary mampiroborobo ny fanarenana haolo vaovao. Raha ny fahasimbana ambaratonga faharoa, mety vokatry ny fahasimban'ny dopamine neuron, ny Monosialotetrahexosylganglioside dia hampiato ny vokatra sy hampitombo ny fahaveloman'ny neurons.
Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1) fiantraikany
Na dia ny gangliosides aza no kely indrindra ao amin'ny atidoha, dia tena goavana ny asany. Ireo molekiola ireo dia manana fiantraikany tsara amin'ny fitomboana, ny famerenana amin'ny laoniny, ny fanamboarana, ary ny fiarovana ny vatana.
GM1 dia mitaky taona. Ny fahanterana dia mifandray amin'ny fampiasana tafahoatra ny atidoha, ny fahataran'ny fahazavana, ny fahasimbana amin'ny tsy fahampian-tsakafo, na ny tsy fahampiana fahatsiarovana. Ankoatr'izany dia mety hipoitra ny aretina efa antitra efa antitra toy ny aretim-po sy ny lozam-pifamoivoizana ary ny demokrasia.
Ny fametrahana ny GM1 mivonto matetika dia manampy amin'ny fitantanana ny ankamaroan'ny sendikan'ny fahanterana. Ny sasany amin'ireo tsindrona voajanahary Monosialotetrahexosylganglioside (GM1) dia ahitana ny fitsaboana ny aretin'ny Alzheimer, ny tsoka, ny areti-mifindra, ary ny parasy. Ankoatra izany dia mihena ny fahanterana fanatsaràna tsiaro.
Ny fampiasana GM1 amin'ny fangatahana klinika dia tena goavana. Ohatra, firenena eoropeanina sy amerika maromaro no nitondra ny tsimokaretina natiora monosialotetrahexosylganglioside mba hitantanana aretina CNS.
Mampitombo ny fivelaran'ny sela nerveau, ny fivoaran'ny taovan'aretina, ary ny fisorohana ny aretin'ny neurolojia. Matetika, io molekiolan'ny exogenous io dia mitandro ny aretin'ny atidoha, ny ratra ara-pananahana, ny aretina azo avy amin'ny firaisana, ary ny ratram-po.
Ny fandrosoana faran'izay manan-danja indrindra amin'ny fianarana sy ny fampiharana io fitambarana io amin'ny olombelona dia nahitana fa tsy nisy ny fiantraikan'ny sarisary monosialotetrahexosyl ganglioside (GM1).
Ny vokatry ny GM1 dia tsy tombanana fotsiny. Ao amin'ny 1976, Ceccarelli dia nanamafy fa ireo gangliosides mihoam-pampana dia miteraka ny fanavaozana ny foza sy ny fiterahana ary ny fanamboarana sela simba. Io fikarohana io dia nametraka fototra mafy orina ho an'ireo manam-pahaizana izay naneho fahalianana tamin'ny fianarana ny anjara asan'ny GM1 ao anatin'ny rafi-pitabatabem-bahoaka.
Ny fitsapana amin'ny toeram-pitsaboana dia manamafy fa ny fiantraikan'ny Monosialotetrahexosylganglioside dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny fitomboan'ny fahasamihafana, ny fampivoarana, ny fampandrosoana ary ny famerenana ny sela ho an'ny neurological. Ankoatra izany, ny fikarohana dia manatsara ny fahombiazan'ny GM1 amin'ny fitiliana ny neuroprotection, ny neuroplasticity, ary ny fampitaovana synaptika.
Ho an'ny tranganà trauma, ny fakana an-tsokosoko ny Monosialotetrahexosylganglioside dia mety hisy fiantraikany amin'ny rafi-pitabatabana amin'ny fomba maro. Ny molekiola dia tsy vitan'ny hoe manentana ny taranaka misy ny sela ihany fa mampitombo ny tahan'ny fahavelony. Faharoa, manana andraikitra manan-danja amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fanarenana ny asany.
Hatreto, ny gonlioside Monosialotetrahexosyl no hany fitsaboana CNS izay mitranga.
Ny molekule dia singa ganglioside, izay vita tsindraindray ao amin'ny sela miafina ny biby mampinono. Noho ny votoaty manan-karen-tsak'izy ireo ao amin'ny tebiteby, ny mpahay siansa sy ny mpitsabo dia afaka nanararaotra sy nampiasa izany tamin'ny fanomanana ny ganglion monosialotetrahexose.
Manala ny ganglioside Monosialotetrahexosyl avy amin'ireo sela mammals. Na dia afaka manavaka ny molecule avy amin'ny omby na osy aza ianao, ny fomba azo antoka indrindra dia ny fanesorana atidoha. Ny antony dia ny fitrandrahana Monosialotetrahexosyl ganglioside avy amin'ny omby na osy dia mety handefa ireo prôtea misy aretina toy ny aretina madinidra sy ny epilepsy.
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitrandrahana labosy Monosialotetrahexosylganglioside (GM1) dia azo ekena, mahomby, ary ara-toekarena. Manome anao ny GM1 azo antoka sy madio avy amin'ny atidoha kisoa, satria ny fomba tsy mampita ny aretina ho an'ny olombelona.
Ho an'ny tombontsoa avo lenta, dia ampiharintsika ny fomba fanesorana ny rano amin'ny ranom-boasary. Aorianay, manatanteraka fifanakalozan-dronono anônika izahay ary manavaka ny fisintahana chromatographic. Ity fanadiovana ity dia manome molekiolan'ny homogenous, izay> 98% madio amin'ny HPLC.
Ny fiantraikan'ny ganglioside monosialotetrahexosyl dia manan-danja amin'ny fangatahana klinika. Fanafody fitsaboana azo ekena ho an'ny fitantanana ny aretin'ny neurolojia sy ny fitsaboana amin'ny ratra amam-borona.
Na tianao hividy GM1 amin'ny fampiasana fitsaboana na tanjona fikarohana ianao dia manome antoka anao ny vokatra avo lenta. Izahay dia mamokatra Ny volon-koditra monosialotetrahexosylganglioside (GM1) araka ny fitsipika ankatoavin'ny kalitao.
Schneider, JS, Roeltgen, DP, et al. (1998). Ny aretina Parkinson: Fihetseham-po kokoa amin'ny GM1 fitsaboana ganlioside amin'ny fikarakarana maromaro amin'ny toeram-pitsaboana.
Bansal, AS, Abdul-Karim, B., Malik, RA, et al. (1994). IgM Ganglioside GM1 Antikôlôjia amin'ny marary amin'ny aretina Autoimmune na Neuropathy, ary fitantanana. Journal of Clinical Pathology.
Mocchetti, I. (2005). Ny ganliosides hafakely, ny plastika sy ny plastika, ny neurotrophins.
Aureli, M., Mauri, L., Ciampa, MG, Prinetti, A., Toffano, G., et al. (2016). GM1 Ganglioside: Fianarana amin'ny ho avy sy ny mety ho toetry ny hoavy. Molecular Neurobiology.
Bian, L., Yang, J., ary Sun, Y. (2015). Ny fanasitranana sy fanadiovana ny Monosialotetrahexosylgangliosides avy amin'ny Pig Brain amin'ny alalan'ny fitrandrahana sy ny famarotana raki-peo.
Previous Previous post: Ny Tokony Hahafantaranao ny Pyridines